Akwukwo - Njirimara na ojiji nke ugba eji emeghari
Njirimara na ojiji nke redispersible ntụ ntụ
Njirimara na ojiji nke ntụgharị eji emegharị
Ngwakọta ntụpọ latex na-acha uhie uhie bụ ntụ nke na-emepụta pọmpụ nke ejiri mepụta polymer gbanwetụrụ site na nhicha. Ọ nwere ezigbo dispersibility na enwere ike re-emulsified n'ime anụ polymer emulsion mgbe ị gbakwunye mmiri. Ihe a rụpụtara bụ otu ihe ahụ ka emulsion izizi ahụ. Yabụ, ọ ga-ekwe omume iwepụta ngwa agha agwakọtara agwakọta dị elu, si otú a kwalite njirimara nke ngwa agha ahụ.
Redispersible latex ntụ ntụ bụ ihe dị mkpa ma dị mkpa na-arụ ọrụ mgbakwunye maka ngwa agha. Ọ nwere ike melite arụmọrụ nke ngwa agha, dịkwuo ike nke ngwa agha, melite bonding ike nke ngwa agha dị iche iche substrates, ma melite mgbanwe na deformability nke ngwa agha Nguzogide, compressive ike, flexural ike, abrasion eguzogide, ike, adhesion na mmiri njigide ikike , ike oru. Na mgbakwunye, ụrọ latex nwere njiri hydrophobic nwere ike ime ka ngwa agha ghara iju mmiri.
Onyonyo 1 bu eserese nke ugha ahihia.
Redispersible latex ntụ ntụ maka masonry ngwa agha na plasta ngwa agha nwere ezigbo impermeability, mmiri njigide na ifriizi eguzogide, na elu bonding ike, nke nwere ike n'ụzọ dị irè dozie cracking na infiltration àgwà dị na omenala masonry ngwa agha. nsogbu.
Self-leveling mortar and floor material Redispersible latex powder nwere ikike dị elu, ezigbo njikọ / adhesion ma chọrọ mgbanwe. Nwere ike melite adhesion, nkwụsị abrasion na njigide mmiri nke ihe ndị ahụ. Ọ nwere ike na-ewetara ndị magburu onwe rheology, workability na kasị mma onwe-smoothing arụmọrụ ka n'ala onwe-leveling ngwa agha na screed.
Nrapado ngidi, onye na-ejikọ ụlọ ọrụ Redispersible latex ntụ ntụ nwere ezigbo njigide, njigide mmiri dị mma, ogologo oge mmeghe, mgbanwe, nguzogide sag na ezigbo mgbochi mmiri. Ọ nwere ike iweta adhesiveness dị elu, nguzogide dị elu na ịrụ ọrụ dị mma maka ịgbado nke taịl, nrapado tile nke dị nha na ntanetị.
Mmiri na-enweghị mmiri na-eme ka mmiri na-eme ka ihe dị iche iche na-eme ka njikọta dịkwuo ike, na-ebelata mgbanwe modul, na-eme ka njigide mmiri, na-ebelata ntinye mmiri, ma na-enye ngwaahịa na mgbanwe dị ukwuu, nguzogide ihu igwe na mmiri na-eguzogide mmiri Watertightness na mmiri na-eguzogide chọrọ mmetụta na-adịte aka nke sistemụ akara.
Mpụga mgbidi mpụga mkpuchi ngwa agha Redispersible emulsion ntụ ntụ na mpụga mgbidi mpụga mkpuchi usoro na-eme ka njikọta nke ngwa agha na ike njikọta na bọọdụ mkpuchi ọkụ, ka ị nwee ike ịchọ mkpuchi ma belata ike oriri. Iji mezuo ike ịrụ ọrụ dị mkpa, ike ike mgbanwe na mgbanwe na ngwa mgbokwasị mgbidi nke mpụga, ị nwere ike ịme ngwaahịa ngwa agha gị ka ọ nwee ezigbo ihe njikọta yana ọtụtụ ihe mkpuchi na ntọala ahụ. N'otu oge ahụ, ọ na-enye aka imeziwanye mmetụta nkwụsị na nkwụsị mgbape elu.
Onyonyo nke abuo bu eserese nke ugha ahihia.
Ndozi ndozi ahihia eji emeghari ihe ndi ozo achoro imeghari nke oma, ihe nkenke, nkwekorita di elu, ikike di nma na ikike agha. Mee ka igwe eji arụ ọrụ rụzuo ihe ndị a dị n’elu maka ịrụzi ihe eji arụ ọrụ na nke na-abụghị ihe owuwu.
Interfacial ngwa agha redispersible latex ntụ ntụ tumadi iji na-emeso elu nke ihe, aerated ihe, wayo ájá Adobe na ofufe uyi Adobe. Ọkpụkpụ, ịkpụ, wdg. Ọ na-eme ka nrapado ahụ sie ike, ọ dịghị mfe ịdapụ na mgbochi mmiri, yana ezigbo nguzogide nkwụghachi. O nwere nnukwu ọrụ na arụmọrụ dị mfe, owuwu dị adaba.
Ngwaahịa ntụ ntụ nke na-achazigharị dị ọtụtụ n'ahịa, mana ihe ha nwere bụ otu. Enwere ike ichikota ha na nkenke dika ndi a:
Redispersible ntụ ntụ bụ ntụ nke etolite na-agbanye site na mmịpụta polymer emulsion, nke a na-akpọkwa roba ntụ ntụ. Enwere ike belata ntụ ntụ a ka ọ bụrụ emulsion mgbe ọ kpọtụrụ mmiri, ma jigide otu ihe ahụ dị na emulsion mbụ, ya bụ, a ga-akpụ ihe nkiri mgbe mmiri kpochara. Ihe nkiri a nwere mgbanwe dị elu, nguzogide ihu igwe dị elu na nguzogide dị iche iche dị iche iche. High bonding akara.
A na-ejikwa ụdị ngwaahịa a dịka ihe eji ewu ụlọ dị ka mpụga mgbidi, taịlị njikọta, nyocha ihe eji eme ya, akwa na akwa, stucco plaster, ụlọ ime ụlọ na mpụga putty, ngwa agha eji achọ mma, wdg O nwere ọtụtụ ngwa na mma. atụmanya ahịa.
Nkwalite na ntinye nke ụrọ latex emegharịrị emeziwanye arụmọrụ nke ihe ụlọ ọdịnala, meziwanye njikọta, njikọta ike, ike mgbanwe, mmetụta nguzogide, nkwụsi ike mgbochi, ịdịte aka, wdg nke ngwaahịa ụlọ. Mee ngwaahịa a na-ewu ya na njiri mara mma ya na ọmarịcha teknụzụ dị elu iji hụ na ịdị mma nke ọrụ owuwu.
Post oge: Jun-08-2019